Brezila : Nesorin’ny Toby Famokarana Herinaratra Saingy Niverina Eny Amoron-Drano ny Mponina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2013 8:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English, 繁體中文, 简体中文, Português
Vidas em Trânsito (Fiainana an-tselika) [pt] no lohateny voalohan'ity tantara nosoratan'i Ana Aranha ity ary isan'ny fanadihadiana manokan'ny antokon-draharaha fanaovan-gazety mpanao fanadihadiana Breziliana Pública #AmazôniaPública (Public Amazon),izay mitatitra ny fiantraikan'ilay tetikasa fanorenana lehibe manamorona ny reniranon'i Madeira ao amin'ny fanjakan'i Rondônia any Brezila. Hatao in-dimy mamoaka ato amin'ny Global Voices Online ity tantara ity.
Lahatsoratra teo aloha: Brezila : Nampangain'Ireo Mponina Nafindra Toerana Ho Nanao Fampanantenana Poakaty Ny Toby Breziliana Mpamokatra Herinaratra
Nanapa-kevitra ny hiverina any amoron'ny rano ny fianakaviana Batista rehefa nitoetra nandritra ny roa taona tao an-tanànan'i New Mutum, tanàna naorin'ny orinasa Energia Sustentável mba hipetrahan'ireo injeniera sy ireo olona ampiasainy ao amin'ny toby famokarany herinaratra Jirau sy ireo mponina tamoron'ny rano, antsoina hoe ribeirinhos, izay nafindra toerana rehefa nodiforana rano ilay faritra mba hanaovana toby famokarana herinaratra. Nanapa-kevitra ny hiverina eny akaikin'ny renirano ny fianakaviana Batista. Nanangana trano hazo ry zareo, miaraka amin'ireo mpifanila vodirindrina taminy taloha tany Mutum, eo akaikin'ny bayou iray (honahona kely) atao hoe Jirau.
Nefa ankehitriny dia ahiana mbola ho safo-drano ihany koa io toerana io.
Mivezivezy eny anivon'ny mponina sy ny mpiasan'ny toby famokarana herinaratra io vaovao io, izay dinihin'ny mpampanoa lalàna Renata Ribeiro Baptista ao amin'ny birao federalin'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny fanjakana federalin'i Rondônia. Izao no nambarany : ” Tsy manaiky izany Jirau, fa arahanay akaiky io toe-draharaha io.
Mampiseho ny tian-kano tsy tian-kano atrehan'ireo mponina amoron-drano ity toe-draharaha ity. Niverina amin'ny fiainany taloha izay misy ifandraisana amin'ny renirano izy ireo. Saingy efa nalain'ny toby famokarana herinaratra ny fiainana araka izay nahafantaran-dry zareo azy.
“ Tsy mihevitra ny tenako ho teratany Breziliana intsony aho fa tahàka ny alika am-patorana tsy afaka misafidy izay ho alehany,” hoy i Jonas Romani, mpanjono 55 taona. Nonina tao amin'ny distrikan'i Jaci Paraná izay nataon'ilay toby famokarana herinaratra Santo Antônio difotry ny rano. Nifindra nankany Jirau, tahaka an'i Batista izy, ary ankehitriny tsy mahita tory amin'ny fiheverana fa hoe tsy maintsy hifindra toerana indray. “Raha ohatra ka tsy azon'izy ireo antoka fa ho tondraka hatreto amin'ity toerana ity, nahoana no tsy nakatony ary ity faritra ity? Navelany ho tonga eto izahay, hanangana ny fanananay, hamboly ny mangahazonay, nefa ho safo-drano daholo indray rehefa avy eo ?”
Nipetraka tao amin'ny tanànan'i Mutum Paraná i Esmeralda Marinho Gomes, tanàna izay nafindra satria nataon'ilay toby famokarana herinaratra Jirau safotry ny rano ilay faritra. Lazainy fa tsy mbola nahazo tambiny velively izy. Hazavain’I Esmeralda ny fomba tsy mahatamana ireo mponina tamoron’ny rano ao amin’ilay tanàna izay naorin’ny toby famokarana herinaratra, New Mutum, ka nahatonga azy ireo niverina nanorim-ponenana eny akaikin’ny renirano. Ahiany ny ho avin’ilay vondrom-piarahamonina rehefa vita ny asa fanorenana ary tsy hisy intsony ny asa.
Misy tsy rariny mandrakariva ny fanalàna ny olona amin'ny toerana nanorenany ny fiainany. Misy ny tsy rariny kely ary misy ireo goavambe. Iray amin'ireo lehibe ny tantaran'i Esmeralda Marinho Gomes, 63 taona.
Nanofa trano tao Mutum taloha izy hatramin'ny 2006. Fa na dia mpanofa trano aza dia manan-jo hisafidy amin'ny fanampiana 55.000 reais Breziliana ( eo ho eo amin'ny 28.000 dolara Amerikana) na trano kely any Mutum Vaovao. Saingy ny herinandro izay nandalovan'ny mpiasan'ny toby famokarana herinaratra hanao fanisana ny mponina, lasa niasa tany amin'ny toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany i Esmeralda. Rehefa tafaverina izy dia nanomboka nanandrana ny hifandray tamin'ilay toby famokarana herinaratra. Koa satria isan'ireo mponina tsy manana taratasy ara-dalàna io vondrom-piaraha-monina io, tsy misy taratasy ara-dalàna ny trano, noho izany tsy misy ny fifanekena fa fifanarahana tsotra amin'ny tompon-trano ihany no atao:
Tany am-boalohany dia nolazain-dry zareo fa eo ampandinihana ny momba azy. Tato aoriana anefa nolazaibn-dry zareo fa tsy ampy ny porofo.
Tsy nandray tambiny velively izy.
Rehefa nandeha tany Mutum Vaovao ny mpifanolo-bodirindrina aminy, dia nanofa trano tao an-tanàna i Esmeralda. Rehefa nifindra tany amin'ilay honahona ao Jirau ny ampahany voalohany dia nifindra niaraka tamin'ireo izy.
Mampanahy ny ho avin'ireo trano 16.000 ao Mutum Vaovao rehefa lasa ireo mponina amoron-drano ary tsy misy intsony ny karama ao amin'ny toby famokarana herinaratra. Mampihena tsikelikely ny isan'ireo mpiasa ny ao aminy ilay toby famokarana herinaratra Jirau. Tokony ho vitaina amin'ny 2016 io asa io, rehefa mihavitsy ireo mpiasa manorina trano eo akaikin'ny foto-drafitr'asa. Hatramin'izao tsy mbola misy orinasa na zavatra hafa mampidi-bola tsy mifandray amin'ilay toby famokarana mba niforona tao amin'io faritra io.
“Efa manana ny tranokeliko any Jaru aho [renirano iray hafa noho ny reniranon'i Madeira ]” hoy i Sônia, mponina tany Mutum taloha izay manana trano fivarotana akanjo any Mutum Vaovao :
Rehefa vita ny fanorenana, tapitra ny asa, vita ny zava-drehetra. Hanjary tànana haolo ity toerana ity.
Nampiasa ekipa mpanao fanadihadiana ny tetik'asa Amazônia Pública, avy aminà Masoivohom-panjakana fanaovana fanadihadiana sy fanaovan-gazety ho any aminà faritra telo Amazoniana ny Agência Pública teo anelanelan'ny volana Jolay sy Oktobra 2012, ary an'isan'izany ny toby famokarana herinaratra ahodin-drano ao amin'ny reniranon'i Madeira any Rondônia. Mitrandraka ny hasarotry ny asa lehibe atao ankehitriny any Amazona ny fanadihadiana rehetra, ao anatin'izany ny fanelanelanana sy ny resaka ara-politika, hatramin'ny fihainoana ireo mpandray anjara rehetra – governemanta, orinasa ary ny vondron'olon-tsotra- mba hanoritsoritana ny zava-misy izay ivelaran'ireny tetikasa ireny. Mirona mankany amin'ny tombontsoam-bahoaka ny tarigetran'ireny fanadihadiana ireny, araka ny tatitra avy amin'ny Agência Pública : tamin'ny fampihàrana azy, ahoana no fiantraikan'ny asa natao, ny fifampiraharahàna ara-politika, sy ara-toekarena tamin'ny fiainan'ny olona.